समकालीन कला रुझान: что такое
मुख्य » समाचार » समकालीन कला रुझान
समकालीन कला रुझान
समकालीन कला र कला बजार प्रत्येक पारित दिन संग विस्तार गरिएको छ. को पाठ्यक्रम, प्रविधि नयाँ कलाकारहरूको र रुझान पूरा गर्न नयाँ गति दिए. यो प्रदर्शनियों र संग्रहालयहरु भ्रमण गर्न आवश्यक छैन, नयाँ निर्देशिका को रिलीज पालना: इन्टरनेटमा जडान गर्न पर्याप्त - आँखा अघि र वर्तमान दिन प्राचीन कला को दुनिया देखिन्छ. का समकालीन कला मा वर्तमान रुझान सामना गरौं.
यस लेखमा ग्राफिक्स संसारमा मुख्य रुझान विश्लेषण, प्रदर्शन र प्रतिष्ठानहरु.
ग्राफिक डिजाइन को दुनिया मा धेरै रोचक दृश्य तस्बिरहरू. तस्बिरहरू बङ्ग्याउन द्वारा हासिल, प्रभाव तथाकथित Gluck, कलाकार बीच एक लोकप्रिय प्रवृत्ति - विशेष गरी डिजिटल संसारमा. पहिले, यस्तो झुकाव, विरूपण अविश्वसनीय कष्टप्रद. तथापि, समकालीन कला माथि केही कदम कदम छ: को, विवाह गर्न प्रयोग के, अब एक विशेष सिर्जना. 2018 वर्ष – поистине время, जब गडबड प्रभाव संग तस्बिरहरू दुनिया भर लिइरहेको.
पुस्तकहरू को संरचना
फेरि, मूर्तिहरु को फारम, यसलाई पहिले दशक कल्पना गर्न असम्भव थियो. इलेक्ट्रनिक ढाँचा विकास संग, कागज संस्करण, दुर्भाग्य, यो सबै भन्दा राम्रो अवधि मार्फत रहेको छ. तथापि, कलाकार फरक आँखा र त्यसपछि साथ संसार हेर्न, अरूलाई बस विषय भनेर, तिनीहरूलाई लागि यो masterpieces सिर्जना गर्न भौतिक छ. पुस्तकहरू कि ढेर निर्माण सामाग्री भयो, जो बाट यो अविश्वसनीय तथ्याङ्कले जन्म हुन्छ, संरचना. फारम र सामग्री प्रत्येक अन्य पूरक सक्छ वा, वा द्वन्द्वमा, दर्शक देखि विविध प्रतिक्रिया उत्पन्न.
केही कलाकारहरूको वनस्पति र जीव को रूपांकनों रुचि, राहेल जस्तै आशा (Rachael Ashe), अन्य, Anouk Kruitof जस्तै (Anouk Kruithof) यो पर्खाल crumbling एक मूर्तिकला सिर्जना. कागज पुस्तकहरू रचनात्मक मान्छे को लागि धेरै फारम, शब्दकोश, memoirs एक सरस्वती भयो. आफ्नो हात मा, दर्शक एक पूर्ण बिभिन्न कोण संग एक पुस्तक देख्ने, तर कम कुनै सुन्दर.
Lego डिजाइनर देखि मूर्तिहरु
यसलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ, यी Eccentric रचनाहरूको को निर्माताहरू वा बस प्राण बढ्न थिएन, या बस पर्याप्त प्ले छैन. तथापि, कलाकार बस अस्पष्ट छैन मुर्ति बनाउन, सरल समुद्री डाकू जहाज वा महल, र अविश्वसनीय मात्रा र फारम, लागू गरिएको कला बिल्कुल छैन बच्चा वस्तुहरु.
लगभग आधा शताब्दी पहिले, प्रसिद्ध डिजाइनर सिर्जना भएको छ, र संसारमा केही मान्छे छन्, detalek केहि देखि निर्माण गर्न प्रयास गर्ने. तर कलाकार, पहिलो नजर मा पनि यस्तो तुच्छ लागि, भौतिक समकालीन कला को दुनिया मा एक नयाँ दिशा गर्न stepping पत्थर भएको छ. Один из самых известных в мире создателей таких невероятных композиций – американский нео-скульптор Nathan Sawaya. Вот только некоторые из его работ: репродукция картины Эдварда Мунка «Крик», копия Парфенона и, наконец, четырехметровый скелет тираннозавра.
К примеру, जापानी Chiharu Shiota वस्तुहरूको विभिन्न कोठा वरिपरि मोड किसिमहरु. केही दर्शकहरु कामहरू पराउँछु, अरुले गाढा र आतंकित गर्नु हुन विचार. तथापि, यो indifferent रहने छैन. मेक्सिकन गब्रिएल डेव इन्द्रेणी yarns को एक रोमाञ्चक ठूलो मात्रा स्थापना सिर्जना. आफ्नो काम लेखक सुरक्षा र आवासको लागि मानव आवश्यकता मनन गर्न खोज्छ. फिलामेंट्स को स्कट Hove, डोरी, bechevok, डोरी को वेब weaves. तर Emil Lukas, यस्तो असामान्य सामाग्री प्रयोग, तस्वीर ड्र. रंग सूत्रहरू काठ बोर्ड को swathes बरु, एक आश्चर्यजनक सार ढाँचाको सिर्जना.
उल्लेख मात्र केही कलाकारहरूको. धेरै लेखक को संसार मा, यसको originality स्थापना कुन सिर्जना आश्चर्यजनक, विषयहरू सबै किसिमका सम्झँदा, तिनीहरूले छुने.
एक रोचक प्रवृत्ति, जो तपाईं मात्र करोडपति र कला संग्रहकर्ता एक कृति किन्न अनुमति दिन्छ. kopipasta युग धेरै फरक तरिकामा कला काम निर्माण को विचार मा ताजा नजर र विभिन्न मूल्य विभाग मा अनुमति.
के छ. तस्विर सीमित संस्करण वा कागज मा मुद्रित छ, वा क्यानभास मा. यसरी, प्रत्येक एक मूल प्रतिलिपि, कि प्रमाणित छ.
अन्तरक्रियात्मक सडक कला
सडक कला प्रकार विविध र बहुमुखी छन्: लेखक केवल आफ्नो काम प्रस्तुत गर्न प्रयास गर्दै, तर पनि आफ्नो खेल मा दर्शक समावेश गर्न. सडक कला अब कुनै आश्चर्य छ - केही बर्बरता रूपमा हेर्न, र अरूलाई विचार गर्दै छन् र विशेष काम मनपराएका छलफल. कला मा धेरै धेरै चिरपरिचित विश्व कलाकारहरूको यस्तो मूल विधा मा आफ्नो हात प्रयास, तर अज्ञात.
यी तस्बिरहरू मा मुख्य कुरा हो - यो विचार छ, लेखक दर्शक गर्न व्यक्त गर्न प्रयास गरिएको छ.
आश्चर्यजनक दुनिया, जो सिर्जना कलाकारहरूको, वास्तविक वस्तुहरू वा जीवित कुराहरू मुछिएको, साथै धेरै सानो मानिसहरू सिर्जना. शीर्षकहरू Mirkov अविश्वसनीय विविध: समानान्तर वास्तविकता, जीवनमा बाल्यकाल वा साधारण क्षण. थम्बनेल यसको सटीक लागि प्रशंसा गर्दै. एक आश्चर्यजनक कल्पना संग मास्टर एउटा सानो ठाउँ मा जीवनको वास्तविकताहरु ल्याउँछ विशेष गरी जब.
केही लेखक साधारण पिस्ता को Martian बोट मा रूपान्तरित, बोट भरिएको अन्य बक्स, बालुवा र मान्छे, जबकि पुरुषहरु को लागि तेस्रो Fanta बोतल - vinogradinok भर्नको लागि एक बिरूवा छ.
समकालीन कला कला केन्द्र र कलेजहरु परे सारिएको छ, यो बिल्कुल छैन समान छ, कि संग्रहालयहरु मा देखाउन निर्णय. र यो सबै ठूलो छ, यो आवश्यक छैन किनभने सीमाहरु सिर्जना गर्न, र कल्पना अनन्त छ. तसर्थ, भविष्यमा हामी पनि असामान्य थप प्रचलनहरू हेर्न आशा गर्नुपर्छ, कारण जो मूल काम को लेखक दर्शक प्रसन्न हुनेछ.